Natiijooyinka horyaalka Ingriiska – BBC News Somali – LaacibOnline
Natiijooyinka horyaalka Ingriiska – BBC News Somali
Waxay ahayd cayaar xiise badan oo labada dhinac ay fursado qaali ah heleen balse ay kala dhalin waayeen sagaashankii daqiiqo ee caadiga ahaa.
Hase yeeshee, shan daqiiqo oo dheeraad ah oo lagu daray, ayaa keentay in Remires laad toos ah oo loo dhigay meel ka baxsan diilinta sideed iyo tobanaad uu soo laaday Lampard, waxaana difaaca Everton dabamararay oo ciriiriyay goolhayaha John Terry oo lugta la helay kubadda oo shabaqana dhigay.
Goolkaas dhashay waqtiga dheeraadka ayay ku adkaatay kooxda Chelsea, kuna sii xigsatay hogaaminta.
Manchester City lafteedu gool kaliyay ayay kaga badisay kooxda Stokeoo daqiiqadii 70-aad u dhaliyay Yaya Toure, oo hadda waxay sadex dhibcood oo kaliya ka hooseysaa hogaamiyayaasha Chelsea oo 60 dhibcood leh, balse Man City cayaar ayaa u dhiman, taasoo hadii ay badiso ay barbardhac dhibcaha ah noqon lahaayeen, hase yeeshee Man City ay leedahay 42 gool halka Chelsea ay leeday 28 gool.
Arsenal, waxay iyaduna ku durdurisay kooxda Sunderland oo marti u ahayd.
Daqiiqadii Shanaadba waxaa gool u dhaliyay Arsenal Giroud, iyo daqiiqadii kow iyo sodonaadna uu isla Giroud u dhaliyay gool labaad, sadex daqiiqo ka hor qaybta horena Rosicky ayaa u sadexeeyay, iyadoo goolka afaraad uu dhaliyay Koscielny.
Goolka kaliya ee Sunderland wuxuu dhashay cayaarta oo sagaal daqiiqo kaliya ka dhiman tahay, waxaa dhaliyay Giacherini.
Cayaaraha kale Cardiff Hull ayaa u tagtay oo 4-0 uga badisay.
WestBrom iyo Fulham 1-1 ayay ku kala baxeen, iyadoo West Ham-na ay Southhampton ku quusisay 3-1.
Crystal Palace iyo Man United, kulankooda hadda ayuu gabagabo ku dhow yahay.
Liverpool beri ayay Swansea la cayaaraysaa, Newcastle iyo Aston Villa way is arkayaa, Norwich waxay martigalin doontaa Tottenham.
Sadexda koox ee ugu hoosaysa waa Sunderland, Cardiff iyo Fulham.
← Somalia: AMISOM Deploys 160-Strong Police Unit to Serve in Southwest State, Somalia
Tababaraha Man City oo eedeeyay garsooraha →
Wales oo gaartay nus-dhammaadka Euro 2016
Xulka kubadda cagta Croatia oo la ganaaxay
Costa Rica oo u soo baxday wareegga 8-da